Bogga ugu weyn » Hawaii News Travel » Diyaaradda Hawaiian waxay duulimaadyadii dib ugu soo celisay Tahiti
Shirkada Diyaaradaha ee Hawaiian ayaa maanta shaacisay soo noqoshada duulimaadyadii u dhexeeyay Aloha Gobolka iyo Tahiti oo bilaabmaya Ogosto 7.
Dib u bilaabida adeegan ayaa ka dambeysay markii la bilaabay barnaamij tijaabinta safarka ka hor inta u dhaxeysa Hawaiʻi iyo French Polynesia kaas oo u ogolaanaya safarka bilaa karantiimada ee labada jasiiradood
Hawaiian waxay dib u soo celin doontaa duulimaadkii todobaadlaha ahaa ee aan kala joogsiga lahayn ee u dhexeeyay Honolulu's Daniel K. Inouye International Airport (HNL) iyo Tahiti's Fa'a'ā International Airport (PPT).
Duulimaadyada waxaa lagu qaadi doonaa diyaaradaha 278-kursi ee Airbus A330.
Hawaiian waxay bilawday safarkiisi ugu horreeyay ee Hawaiʻi - Tahiti bishii June 1987. Duulimaadyada ayaa markaa la hakiyay Maarso 2020 sababo la xiriira faafida COVID-19 Diyaaradda sidey duulimaadyadeedii dib ayey u suurta galisay barnaamijka tijaabada safarka kahor oo ay aasaaseen Hawai'i Gov. David Ige iyo French Polynesia President Édouard Fritch - natiijo ka dhalatay kiisaska COVID-19 ee hooseeya ee labada meelood.
"Waxaan rajeyneynaa inaan dib isugu xirno jasiiradeena, laakiin tan ugu muhiimsan, inaan dib isugu xirno xubnaha qoyska ee aan is arag muddo sanad ka badan," ayuu yiri Peter Ingram, Madaxweynaha iyo Madaxa Shirkadda Hawaiian Airlines. "Waan ku qanacsanahay shaqada baaxada leh ee ay qabteen dowladaha French Polynesia iyo Hawai'i si ay u furaan isu socodka goboladayaga."
Hawaiʻi iyo French Polynesia labaduba waxay hirgelin doonaan shuruudo adag oo dhanka safarka ah oo loogu talagalay dadka degan iyo kuwa soo booqda. Kuwa ka soo socdaalaya PPT ilaa HNL waa inay dhammaystiraan oo ay soo rogaan natiijo diidmo ah oo ka timid Institut Louis Malardé, oo ah la-hawlgala baaritaanka gobolka-oggolaaday, ee gobolka Hawaiʻi Barnaamijka Safarka Badbaado. Martida u safraya PPT ee HNL waxay u baahan doonaan inay keenaan cadeynta talaalka waana ay dhameystireen dawladda shuruudda soo gelitaanka Tahiti ee COVID-19 safarka ka hor. Kuwa aan u hogaansamin waxaa lagu ridi doonaa karantiil 10 maalmood ah.
Qaar badan oo ka mid ah dadka degan Hawaii waxay leeyihiin qoys gudaha Tahiti, iyo ku soo dhaweynta martidayada French Polynesia ilaa Hawaiʻi waa talaabo muhiim ah oo lagu ilaalinayo xiriirka dhow ee ka dhexeeya labadeena gobol, ”ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Hawaiʻi David Ige.
Duullimaadka Hawaiian Airlines HA481 wuxuu tagi doonaa HNL 3:35 pm Sabtida, Aug. 7 wuxuuna imaan doonaa PPT 9:30 pm Duulimaadka HA482 wuxuu tagi doonaa PPT 11:30 pm isla fiidka wuxuuna imaan doonaa HNL 5:15 am maalinta xigta.
Hawaiian's "Inaan ku nabad geliyo" Nadiifinta la xoojiyey waxaa ka mid ah jeermiska jeermiska badan ee aagagga guryaha, kiishka, iyo tigidhada tikidhada, buufinta qolka diyaaradda ee electrostatic, carqaladaha loo yaqaan 'plexiglass' ee miisaska shaqaalaha ee garoonka, iyo nadiifinta mashiinka loo qeybiyo martida oo dhan. Shirkadu waxay u baahan tahay martida oo dhan inay buuxiyaan a foomka aqoonsiga caafimaadka inta lagu guda jiro hawsha baaritaanka oo muujinaysa inay ka madax bannaan yihiin calaamadaha COVID-19 waxayna u hoggaansami doonaan shirkadda siyaasada maaskaro la cusbooneysiiyay dhammaan safarkooda.